Buugaagta sheekooyinka gaagaaban ee ugu fiican
3-da buug ee ugu fiican ee Etgar Keret
Marar dhif ah ayaa sheekada gaaban gaarto qiimaha loo malaynayo in ay ka weyn tahay sheekada ama curisnimadu sida shaqooyinka astaanta u ah qoraha xirfadda leh. Taasi waa sababta kiiska Etgar Keret uu u yahay qoraaga sheekooyinka iyo sheekooyinka kuwaas oo ka dhex hela heerka ugu sarreeya ee xaqiijinta sheekada. In ka badan …
Quartet, waxaa qoray Soledad Puértolas
Wareeggu waa dhammaystir, safarka soo noqoshada, ugu dambayntii waa la xidhay. Fagaaraha ayaa aad uga daacadsan nolosha dhabta ah. Joomatari ayaa weli aad ugu dhow dhammaystirka la rabay laakiin dhammaadka maalinta oo leh xaglo iyo geeso lama huraan ah. Soledad Puértolas wuxuu noo keenayaa afartan, ...
Qabashada Cirka, oo uu qoray Cixin Liu
Waxaan dhawaan aqriyay in buuqa weyn uusan noqon karin wax bilow ah laakiin dhammaad. Kaas oo aan ku heli lahayn nafteena heesaha ugu dambeeya ee heesaha Caalamka. Su'aasha loogu talagalay qorayaasha khiyaaliga ah ee sayniska ee da 'kasta waa inay arkaan xaddidaadda sababta ...
Shimbiraha afka ku jira iyo sheekooyin kale, oo uu qoray Samanta Schweblin
Sheekada wanaagsani waxay noqon kartaa ilaa hees. Samanta Schweblin waxay ka dhigtaa suugaanta xisaabinta nolosha yar -yar oo ay weheliso heesaha duruufahooda. Sheekooyinka Samanta waxay baraarugaan in muusigga muusigga ah ee aan dhammaadka lahayn ee raaxada iyo xusuusta. Maxaa hadhay, wax ay tahay inuu u dhaqaaqo sida dhawaaqa ...
Aynu cunno Jimcaha madow, oo uu qoray Nana Kwame Adjei-Brenyah
Hadda laga bilaabo ilaa taariikh dhow, maalin kasta oo cusubi waxay noqon doontaa fursad cusub oo lagu raaxaysto isticmaalka wanaagsan ee aan loo baahnayn iyo kan ugu sarreeya. Dhammaan waa arrin calaamadaynaysa xitaa waqtigeenna dalab ahaan. Ujeedadu waxay tahay in Nana Kwame Adjei-Brenyah (laga yaabee in maalin uun ay go'aansato inay isku magacowdo astaan, ...
Is -weydaarsiga nolosha, waxaa qoray Xavier Sardà
Buug wanaagsan oo sheekooyin gaagaaban ah sida kan uu Xavier Sardà wanaagsan ku soo koobay halkan marnaba ma xanuujiyo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan buugga sheekada gaagaaban ayaa ah in duntu ay tahay mid aan aad u cadayn. Sababtoo ah waxaan ka koobnaan karnaa qaab -dhismeed xor ah annaga oo og. Sidaan oo kale ayaa loo arkay, ku dhawaad ​​qof walba ...
3 buug oo ugu fiican Alberto Chimal
Waxaa jira kuwa u yimaada suugaanta gaagaaban oo jooga. Masiirka qoraha sheekada gaaban waa wax la mid ah haddii Dante uusan waligiis helin jidkii uu uga bixi lahaa cadaabta. Halkaasna Dante wuxuu ku hadhay dhinac iyo Chimal oo dhankiisa ah, sidii inuu aad ula dhacay xiisahaas la yaabka leh ee ...
Burburinta geeska Galaxy, waxaa qoray Etgar Keret
Ku kooban takhasuska kooban, sida sheekooyin kale oo waaweyn oo badan oo maanta ah sida Samanta Schweblin oo aad ka heli karto hees gaar ah, odaygii wanaagsanaa ee Etgar Keret ayaa noo soo bandhigaya mugga sheekooyin carqaladeeya wixii hore u ahaan jiray hal -abuurkiisa sheeko -abuur ee mustaqbalka. Beddel mawduuca,…
Magaalada uumiga, waxaa qoray Carlos Ruiz Zafón
Faa'iido yar bay leedahay in laga fikiro waxa haray si loogu sheego Carlos Ruiz Zafón. Immisa xaraf ayaa aamusnaa iyo imisa tacabir oo cusub ayaa ku dheggan limbo -yaabkaas, sida haddii luntay inta u dhexeysa armaajooyinka qabuuraha xabaalaha. Iyada oo ay fududahay in mid ka mid ah lumo inta u dhaxaysa waddooyinka ...
Mar dambe ha seexan, oo uu qoray PD James
Qoraa kasta oo weyn wuxuu ka helaa nooca madadaalada kooban, xoraynta ama xitaa muujinta. Sidaa darteed, qoraa weyn sida PD James ayaa sidoo kale ku farxay sheekada ama sheekada inay tahay meeshaas dib ula midoobida raadadka ama muses. Sababtoo ah marka ...
Maalmo cabsi leh. by AM Homes
Kobaca ganacsiga Guryaha waxaa lagu muujiyey buug -gacmeed qeexaya qaab xarrago leh oo ku saabsan mawduuca nukliyeerka ee ku xeeran qoyska shaqo kasta oo cusub. Dabcan, waaya -aragnimada Guryaha, carruurnimadiisii ​​korsashada iyo dabka qoyska bayoolojiga ah ee ...